Liiska dhoofinta ee iskuduwaha juqraafi ee Google Earth, laga bilaabo Excel, oo leh sawir iyo qoraal hodan ah - Geofumadas
Maarso, 2012 Downloads, Google Earth / Maps
Tani waa tusaale sida Excel ugu diri karto waxyaabaha Google Earth. Arrintu waa tan:
Waxaan haynaa liis isku-duwayaal ah oo ah qaab jajab tobanle (lat / lon). Waxaan dooneynaa inaan u dirno Google Earth, oo waxaan dooneynaa halkaas inaan ku muujino koodhka barta xiisaha, qoraal geesinimo leh, qoraal sharaxaad leh, sawir barta iyo hyperlink si uu bog uga furo internetka.
Tusaalooyinka soo socda ayaa ah tusaale ahaan waxa aan rajeyneyno inaan muujino adigoo riixaya dhibicda:
Koodhku waa: XL-3458
Tani waa waxa aan rajeyneyno inaan aragno:
Aqalka Mr Joaquín Gómez Aabe, oo Jaamacadda Qaranku horey u jirtay, waxaana hadda lagu soo celiyay Matxaf ay ilaalinayso Machadka Qaranka ee Antropolog
Inkasta oo template la soo dhajin doono, ruuxa maqaalku waa inuu sharxo sida loo sameeyo adiga keligaa.
Waxa aan ku mashquulsan nahay ayaa ah inaan ku sameysano astaamaha html tiirar kala duwan si ay u awoodaan inay isku xirmaan: Koodhkan tan wuxuu noqon karaa:
<img src=»http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Casas_actiopan.jpg/800px-Casas_actiopan.jpgWidth = »144»Dhererka =»168«>
<a href=»http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_actiopan.jpg«>Eeg website-ka
Dhammaan calaamadaha taas waa inay muujiyaan inay tahay xariiq gooni ah, oo ku xirmaya a taas oo u dhiganta Gelitaan.
Markaas kani waa calaamad muujineysa in qoraalkan uu ku jiro geesinimo, dabcan wuxuu ku xirayaa a
Im waa muuqaal sawir, kaas oo haya siyaabaha sida width (width), dhererka (dhererka) iyo cinwaanka halka image (src)
Ugu dambeyntiina waxaa jira calaamadda 'hyperlink', oo ku furmaya
Calaamadaha mugdiga ah waa content kaasoo isbedelaya muuqaal kasta, sidaas awgeed waxaan daneyneynaa inaan ka tagno unugyada.
Iyadoo aanad u jeedin, waxaad arki kartaa markaa hawlaha isku-dhafka ah waxaa lagu soo koobayaa waxyaabo sidan oo kale ah:
= SHAQAYNTA(,CELDA,,CELDA,,CELDA,<img src=»,CELDA,Width = »,CELDA,»Dhererka =»,CELDA,«><a href=»,CELDA,«>,CELDA,)
Taas oo macnaheedu yahay inaan qabsan doono 8 tiir si aan u kaydinno dhammaan xogta aan dooneyno inaan muujino. In kasta oo laga hadlayo kuwa leh calaamado adeegsanaya = calaamadda iyo xigashooyinka laba-laabka ah, way nagu adag tahay innaga maxaa yeelay Excel-ka koowaad ayaa tilmaamaya hawl kan labaadna waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro nuxurka qoraalka. Tan waxaa lagu xalliyaa iyadoo la gelinayo waxyaabahaas qolal gooni ah sidii iyagoo qoraal ah.
Ugu dambeyn waxaan leenahay tan:
Iyo in aan u diro Google Earth waxaan soo dejiyey badhan oo soo saara faylka. Halkaan waxaad ku tilmaamaysaa wadada faylka uu yahay iyo magaca aan rajeyneyno inaan helno sharaxaadda kml marka lagu muujiyo guddiga bidixda.
Template-ku wuxuu leeyahay tilmaamo ku saabsan dul wareegidda unugyada si uu u soo jeediyo sida xogta loo gelinayo. Guud ahaan, waxay u egtahay inay dhibaato haysato marka macros aan la awoodin iyo marka dariiqa faylka laga abuurayo aan la qori karin.
Halkaas ayaan haysanaa, waxaad raadin kartaa koodhka dhinaca dusha Google Earth, oo gujinaya dhibicda ayaa lagu muujiyay sida aan fileynay.
Tusaale ahaan kml
Waxay ubaahantahay tabaruc astaan ​​u ah soo dejinta, oo aad ku sameyn karto Bixinta ama kaarka amaahda.
Post Previous" Hore Nidaamka Macluumaadka Juqraafi iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS
Post Next Biyaha iyo khariidadaha. IyadooNext »
22 Jawaab celin ah "Dhoofinta liiska iskuduwaha juqraafi ee Google Earth, laga bilaabo Excel, oo leh sawir iyo qoraal hodan
Waxaan horey u soo dajiyay shaxanka, waan baran doonaa waxaanna qori doonaa wixii su'aalo ama wax ka beddel ah. Mahadsanid g '
Waxaan hore u saxnay xiriirka.
Lama xiriirin lacag bixinta bangiga. Waxaan ka socdaa El Salvador. Waad ku mahadsan tahay.
hanna isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado template laakiin ma haysto kaar sida aan sameeyo
Hubi, sidee amaanadu u dhigeysaa qirashada qirashada. Tani waa tusaale:
Ruben Alfredo isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan faylka Excel, oo waxaan qabaa dhibaatooyin aan ka soo qaadayo D: / shaqooyinka / alc disk, fadlan iigu soo diri kartaa sharaxaad ku saabsan sida aan u soo dajin karo sawirada cinwaankaas.
Miyay sawiradu leeyihiin cabbir gaar ah? ama waxaad la shaqeyn kartaa sawirada moodada 4
Haa, dabcan waxaad ka heli kartaa wadooyinka degaanka ee kombiyuutar ama shabakad
waxaa suurtagal ah in la akhriyo sawirada lagu kaydiyo gudaha xaafadda ama isticmaalka qalabka shabakada. Waad ku mahadsan tahay
Codsigan miyuu akhrin karaa sawirada lagu kaydiyaa gudaha adoon isticmaalin URL?
oscar melendez isagu wuxuu leeyahay:
Waa salaaman tahay, waxaan xiiseynayaa inaan iibsado shaxankaaga. Waxaan ka imid Peru, laakiin markaan gujiyo xiriirinta wareejinta akoonka bangiga, ma helo wax la mid ah Aug oo ku keydiyo lacagtaada
Waan ka qoomameyneynaa dhacdada, laakiin horeyba ayaan u bixinnay lacagtii iyo nidaamka lacag bixinta horeba waa loo suurogeliyay.
baxa isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan bixiyo lacago badan oo ka mid ah qorshooyinka halkan jooga oo aanan awoodin
Maqalku ma laha furaha ilaalinta si markaa loo bedelo.
Soo-dejinta waxaa ka mid ah awoodda wax ka beddelidda faylka kheyraadka ama mawduuca ugu muhiimsan ee barnaamijka sareeya.
Ma aha fashil la'aanta, waa sawirka muuqaalka Google
DJ Esteban isagu wuxuu leeyahay:
Dhab ahaantii, xogta aan ku leeyahay Google Earth waa WGS84.
Miyaad heshay sababta keentay fashilka xogtayda?
U dir boostada si aad u aragto. Miiska ii soo dir Excel iyo faylka kml ee uu abuuro. editor@geofumadas.com
Hubi haddii aad isticmaalayso Datum ka soo jeedaan, Google Earth isticmaalaa UTM WGS84.
Waad ku mahadsantahay xawaaraha ku yimid xalka shaqeeyey. Si kastaba ha noqotee, markii aan ku wado faylka «kml» Google Earth, ku dhowaad midkoodna qodobbada isku-duwaha ma muuqdaan oo in yar ayaa la arkaa, ku dhowaad had iyo jeer 1º iyo kan ugu dambeeya ee taxanaha, laakiin aad bay uga fog yihiin waxa u dhigma (100 Kms. Pe. Pe ). Waxaan ku caajistay inaan sameeyo baaritaanno iyo waxba. Ma kuu soo diri karaa faylka oo leh xogta lagu soo diray emayl qaarkeed? Markaa waad arki lahayd waxa dhaca. Waad mahadsantahay
Taasi waa dhibaato la yaqaan, sida kor ku qoran.
Beddel wadada, waxaad gelineysaa feylka si toos ah loogu abuuri karo C: taasna badiyaa looma ogola nidaamka Windows. Adeegso wado kale oo hubso inuu jiro.
Barnaamijku wuxuu u muuqdaa mid aad u wanaagsan, waxaan haystay waqti adag inaan helo.
Waxaan ka soo horjeeday bixinta 2 $ laakiin waxa soo baxday in markii aan ordayo aysan shaqaynayn, ogeysiisuna wuxuu leeyahay:
'Khalad' 75 'ayaa dhacay waqtigii lagu jiray.
Cilad ayaa ku jirta marinka jidka ama faylka »
Waan ku faraxsanahay haddii aad iiga sheegi kartid sida loo xaliyo ama haddii aad iigu soo dirto feyl kale oo Excel, sida ugu dhakhsaha badan, sababtoo ah waa inaan diyaariyaa shaqo matalaya juqraafi ahaan juqraafi aniguna waan soo daahay.
Waxay ku xiran tahay bara-kaca.
Haddii ay barakaceen dhowr mitir (10 illaa 15 mitir) waa sababta oo ah muuqaalka google ayaa barakacay, waxaad arki kartaa isagoo beddelaya sawirkii sanadihii hore oo waxaad arki doontaa in juqraafi ahaan aad u xun yahay. In kasta oo iskuduwaha uu sax yahay.
Haddii barakaca uu ka weyn yahay, waxaa laga yaabaa inay noqdaan isku-duwayaal Meel kale. Google wuxuu adeegsadaa WGS84.
Haddii isku-duwayaashu ay ku dhacaan aag kale oo meeraha ah, waxay noqon kartaa inaad gasho jihada iyo gadaal gadaal. Ama aadan isticmaaleynin astaamaha: Wadnaha galbeedka cirifku waa diidmo, cirifka koonfureedna waa mid xun.
Edgar Coronado isagu wuxuu leeyahay:
Wax ku biirinta aad ufiican ee aad ogtahay oo ah in markaan iskuxidhayda isku dhajiyo aysan i tusinayn meesha ay ku taallo ... maxaad ugu malaynaysaa inay noqon doonto?